20KW FM Shaandheynta Kaasaska Hoose ee Iibka fmradiobroadcast.com
20kW Shaandheeyaha Baasa Hoose ee Iibka Iibso Shaandheeyaha Baasa Hoose ee Xarunta Raadiyaha
Ku saabsan FMUSER 20KW FM Shaandheynta Gudbinta Hoose
Halkee Iibsataa Shaandheynta Gudub Hoose ee Xarunta Raadiyaha?
FMUSER wuxuu ahaa mid ka mid ah hormuudka alaab-qeybiyeyaasha istuudiyaha raadiyaha ku dhawaad ​​nus qarni. Laga soo bilaabo 2008, FMUSER waxay abuurtay jawi shaqo oo kobciya wada shaqaynta hal-abuurka leh ee ka dhaxaysa shaqaalaha horumarinta injineernimada xirfadda sare leh iyo koox wax soo saar leh. Iyada oo loo marayo niyaddan iyo u heellanaanta wada-shaqeynta dhabta ah, FMUSER waxay awooday inay abuurto qaar ka mid ah shirarka elektaroonigga ah ee ugu hal-abuurka leh, iyada oo adeegsanaysa mabaadi'da wakhtiga la tijaabiyay ee shalay oo lagu daray sayniska horumarsan ee maanta. Mid ka mid ah guulaha aan ku faano, iyo sidoo kale doorashada caanka ah ee macaamiisheenna badan, waa annaga RF shaandhada kaarka hooseeya idaacada.
"Haddii aad u raadinayso qalab raadiye oo xirfad leh oo iib ah, maxaad uga dooran weyday mid ka mid ah qalabka istuudiyaha baahinta ugu wanaagsan FMUSER? Waxay daboolaan dhammaan noocyada kala duwan ee shaandhada shaandhada raadiyaha, qaarkood ayaa lagama maarmaan u ah idaacadaha, tusaale ahaan, shaandhada FM-ta hoose, oo ay la socdaan HPF badan oo iib ah, BPF iib ah, BSF oo iib ah, iyo filtarrada daloolka hoose ee baaska iibka sida 88-108Mhz shaandhada hoose ee iibka ah. filter UHF iyo VHF sida UHF bandpass filter iyo VHF bandpass filter, iyo dabcan, sidoo kale waxay haystaan ​​qalab istuudiyo raadiye oo tayo sare leh oo iib ah."
Qaybta Xigta waa Waa maxay sababta filtarrada tamarta hooseeya ee RF loogu baahan yahay? | Skip
Halkee laga iibsan karaa shaandhaynta ka gudubka hoose?
Waa maxay sababta Shaandhooyinka RF-ga Gudubka Hoose loogu baahan yahay?
Sidee U Dhacdaa Harmonic iyo qiiqa wasakhaysan?
Shaandheynta Kaasaska Hoose ee RF ugu Fiican ee Iibka
Sidee loo Doortaa Shaandheynta FM- Harmonics-ka ugu Fiican Xarunta Raadiyaha?
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Shaandhaynta RF
FMUSER 20kW FM filter Pass Low si fiican ugu shaqeeya:
Thanks to warshadda heerka caalami, FMUSER, oo ah hormuudka soo saaraha iibinta qalabka baahinta, ayaa si guul leh ugu adeegay dhammaan noocyada kala duwan ee macaamiisha iyadoo la siinayo xalal baahinta dhameystiran in ka badan 10 sano, hal shay ayaa la hubaa in uu yahay a shaandhada hoose ee awoodda sare shaandhaynta 2aad iyo 3aad ee harmonics shaandhaynta waxaa badanaa loo shaqeeyaa in la isku daro oo laga sooco calaamadaha raadiyaha wireless-ka ee gudbiyaasha raadiyaha FM ee badan.
"Ma odhan karo FMUSER waa alaab-qeybiyaha ugu wanaagsan xarunta raadiyaha adduunka, laakiin qaar ka mid ah hawl-wadeennada idaacadaha, haa, FMUSER runtii waa alaab-qeybiye iyo soo saaraha la isku halayn karo. qalabka idaacada."
- - - - - Peter, xubin daacad ah oo FMUSER ah
▲ Halkee laga Iibsan karaa Filterka Kaaska Hoose ee FM ee ugu Fiican ▲
▲ Ku laabo nuxurka ▲
Waa maxay sababta filtarrada tamarta hoose ee RF loogu baahan yahay Xarunta Raadiyaha?
Qaybta hore waa Halkee laga Iibsan karaa Filterka Kaaska Hoose ee FM ee ugu Fiican | Skip
Qaybta Xigta waa Sidee U Dhacdaa Harmonic iyo qiiqa wasakhaysan | Skip
Qayb Muhiim ah oo ka mid ah Qalabka Idaacadda
Waa kuwan dhowr sababood oo filtarrada hoose ee RF ay lagama maarmaan u yihiin warshadaha baahinta raadiyaha:
Harmonics iyo qiiqa wasakhaysan lama ilaalin karo, waxayna saamayn doonaan idaacadaha ku jira xadhkaha raadiyaha ee kala duwan waxayna hoos u dhigi doonaan tayada barnaamijyada raadiyaha taasina waa qiimaha ugu muhiimsan ee shaandhada hoose ee coaxial ee xarunta raadiyaha.
Haddii aadan isticmaalin shaandhada hoose ee RF ee xirfadleyda ah, waxay u badan tahay in lagu ciqaabo waaxda maaraynta raadiyaha maxalliga ah (sida FCC) abuurista faragelin ballaaran oo raadiyaha, tusaale ahaan, tirooyinka iswaafajinta aan la rabin iyo qiiqa xunxun ee ay dhaliso FM-kaaga iyo gudbiyaha TV-ga
Gudbiyeyaasha raadiyaha waxay adeegsadaan filtarrada kaadhka hooseeya ee soo noqnoqda awoodda sare si ay uga hortagaan qiiqa iswaafajinta ee laga yaabo inay farageliyaan isgaarsiinta kale.
Si loo xakameeyo is-waafajinta gudbinta idaacada FM: Gudbiyeyaasha FM waxay inta badan soo saaraan isku-dhafan - tiro badan oo soo noqnoqoshada gudbinta. Qaarkood waxay keenaan faragalin VHF-TV iyo UHF-TV soo dhawaynta iyo soo dhawaynta raadiyaha gacanta. Taxanahan shaandhada hoose ee awoodda sare leh waxay dhex maraan dhammaan guutooyinka soo noqnoqda ee FM-ka oo leh khasaare hoose waxayna bixiyaan wax badan oo xakamayn ah.
Ka soo iibso Shaandheynta RF Harmonics Broadcast FMUSER
Qiimaha ugu weyn ee RF Harmonics filter waa in lagu caawiyo idaacadaha inay doortaan calaamadaha loo baahan yahay si loo isticmaalo. Gaar ahaan idaacadaha waaweyn, sidii dhageystayaasha loogu heli lahaa barnaamijyo tayo sare leh oo aan la ciqaabin maamulka idaacadaha maxalliga ah ayaa shardi u ah in sare loo qaado tartanka facooda idaacadaha iyo in sare loo qaado garaadka idaacadaha.
FMUSER waxay bixisaa filtarrada harmonic sida 20kW FM filtar hooseeya Heerarka awoodda gudbinta ilaa 20 kW. Naqshad gaar ah ayaa bixisa 45 dB ama diidmo ka weyn laga bilaabo labaad ilaa tobnaad harmonic iyo wixii ka baxsan. Tani waxay soo saartaa filtarrada leh dhererka guud ee 30% ilaa 50% ka gaaban filtarrada harmonic FM ee caadiga ah.
Waxaan haynaa filtarrada RF ugu fiican ee iibka ah, iibso filtarrada RF awoodaas oo u dhaxaysa 500W ilaa 1000W FMUSER! Gaar ahaan, waxay yihiin 20kW FM filtar hoose oo iib ah (LPF) iyo 10kW VHF filtarrada hoose ee iibka (LPF), 10kW VHF bandstop filter oo iib ah (BSF), 350W UHF filter bandpass dhijitaalka ah oo iib ahiyo mid ka mid ah qalabkayaga idaacadaha iibka sareeyo - filtarrada bandpass FM iib ah.
Waxaa laga yaabaa inaad hesho dhammaan waxaad u baahan tahay haddii aad sii wado sahaminta, waanu haysanaa filtarrada bandpass FM Awooddaas oo u dhaxaysa 500W ilaa 1kW, gaar ahaan, waa 500W, 1500W, 3000W, 5000W, 10000W filtarrada bandpass FM kuwaasoo si gaar ah loogu talagalay idaacadaha FM-ta. Ka sokow, habaynta ayaa diyaar u ah filtarrada harmonics, dhammaan waxay wataan kharash miisaaniyadeed iyo tayo la yaab leh, na weydiiso taageero, dhammaanteen waxaan nahay dhego!
Sida mid ka mid ah kulannada baahinta ugu muhiimsan ee idaacadaha FM/TV, shaandhada daloolka RF Waxay lagama maarmaan u tahay sida isku-darka FM / UHF / VHF, gudbiyaha baahinta raadiyaha, anteenada gudbinta, iyo qalabka kale ee idaacadaha la midka ah. Ma aha buunbuunin in la yiraahdo iyada oo ah sheyga udub-dhexaadka ah ee alaabta RF, filtarrada ayaa runtii aad uga muhiimsan shirarka kale ee aan caadiga ahayn ee ku-celiyeyaasha iyo saldhigyada saldhigga.
Weli, shaandhada RF, tusaale ahaan, shaandhada RF-ka ee hooseeya, waa aalad lagama maarmaan u ah dhinaca gudbinta ee xarunta baahinta si loo xakameeyo is-waafajinta uu dhaliyo gudbiyaha. Tani waa sababta oo ah hawlwadeenada nidaamka RF adduunka oo dhan waxay adeegsadaan soo noqnoqoshooyin kala duwan, sidaa darteed waxaa jira calaamado badan oo jahwareersan oo hawada ku socda, qaarkood waxaa loogu talagalay telefishinka, militariga, kuwa kale waxaa loogu talagalay cilmi baarista cimilada iyo ujeedooyin kale.
▲ Waa maxay sababta Shaandhooyinka RF looga baahan yahay Xarunta Raadiyaha ▲
Qaybta hore waa Waa maxay sababta Shaandhooyinka RF-ga Gudubka Hoose loogu baahan yahay | Skip
Qaybta Xigta waa Shaandheynta RF Harmonics-ka ugu Fiican ee Iibka | Skip
Waxa dhibaya dhammaan injineerada RF waa in qiiqa iswaafajinta iyo wasakhda ah aan la iska ilaalin karin. Hawl-wadeennada idaacadaha, aad bay muhiim u tahay in la fahmo waxa is-waafajinta iyo qiiqa qiiqa ah ay yihiin, ama sida ay u abuurmaan iyo sida loo yareeyo saamayntooda.
Isla mar ahaantaana, waxa kale oo faa'iido leh in la xakameeyo tayada barnaamijyada idaacadaha, FMUSER kooxda farsamada ee RF ee xirfadlayaasha ah waxay noo sharaxeen qaar ka mid ah aqoonta aragtida ee ku saabsan iswaafajinta iyo qiiqa wasakhaysan.
Haddii aad rabto inaad si dheeraad ah u fahamto sababta idaacadaha ugu baahan yihiin filtarrada RF ee xirfadleyda ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato waxyaabaha soo socda
Sidee loo abuuraa Harmonics?
Soo noqnoqoshada ku dhaca tiro sax ah oo soo noqnoqoshada ah waxa loo yaqaan harmonics. Si kale haddii loo dhigo, harmonics waa gudbin aan la rabin, taas oo ah tiro badan oo ah inta jeer ee la filayo. Gudbintan aan la rabin waxay ku dhacdaa heer awood ka hooseeya gudbinta la rabo.
Sida aan wada ognahay, waxaa jira qalab aan laga maarmi karin oo ka jira idaacadaha, taas oo ah, gudbiyaasha raadiyaha. Haddii 1kW ama 10kW gudbiyaha si gaar ah loo nakhshadeeyo, iyo qaybta aasaasiga ah ee RF ee gudbiyaha waxaa lagu qalabeeyaa shaandheynta band-pass, laakiin ku dhawaad ​​gudbiyaha RF kasta ayaa soo saari doona qaar ka mid ah is-waafajinta sii daynta
Harmonics sidoo kale waxaa loo arkaa inay tahay sabab suurtagal ah faragelinta RF. Qaababka mowjadaha qaarkood, sida mowjadaha labajibbaaran, mowjadaha sawtooth-ka, iyo hirarka saddex-geesoodka ah, waxay ka kooban yihiin tamar badan inta jeer ee is-waafaqsan.
Sidee loo abuuraa qiiqa wasakhaysan?
Si ka duwan sida harmonics, qiiqa xunxun ma dhaco marka inta jeer ee wax gelinta la labanlaabo; Uma ay faafin ula kac. Sii daynta wasakhaysan waa qiiq shil ah, oo loo yaqaan splash. Waxay yihiin natiijada isdhexgalka, faragelinta korantada, beddelka soo noqnoqda, ama iswaafajinta.
▲ Sidee U Dhacdaa Harmonic iyo qiiqa wasakhaysan ▲
Shaandheeyaha Awoodda Hoose ee RF ugu Fiican ee Iibka
Qaybta hore waa Sida Harmonics iyo qiiqa wasakhaysan ay u dhacaan | Skip
Qaybta Xigta waa Sida loo doorto shaandhada FM Harmonics-ka ugu fiican | Skip
Waxaad u baahan tahay shaandhaynta RF-da hoose ee ka badan waligeed
Dhammaanteen waan ognahay in idaacadaha ay adeegsadaan filtarrada RF hooseeya si looga hortago iswaafajinta iyo qiiqa xasaska ah ee faragalin kara isgaarsiinta kale, halka inta badan gudbiyaasha FM ay dhaliyaan iswaafajin xitaa tobanaan jeer oo inta jeer ee aasaasiga ah.
Nasiib wanaag, FMUSER 20kW FM filtar hooseeya waa mid ka mid ah nidaamyada shaandhaynta nidaamka RF ugu fiican ee band soo noqnoqda FM. Si loo yareeyo saameynta ay keenaan is-waafajinta iyo qiiqa wasakhaysan, FMUSER waxay halkan ku soo bandhigaysaa mid ka mid ah filtarrada is-waafajinta ee aannu ku faano- 20kW RF filter kaarka hoose ee raadiyaha FM.
Shaandhaynta RF-ga Gudub-hooseeya ayaa loogu Naqdiyay Kaliya Tayada ugu Fiican
Haddii aadan rabin in kuwa is-waafajinta aan la rabin ay ku dhacaan xargaha soo noqnoqda ee aan khusayn adiga oo ay keento faragelin culus (waxaa laga yaabaa inaad hesho warqado badan oo cabasho ah oo dhib badan waxaana lagu ciqaabi karaa wakaaladaha sharciyeynta qaarkood), tusaale ahaan, inta jeer ee kanaalada TV-ga ama idaacadaha kale. Isticmaalka FMUSER 20kW RF filtar hoose oo hooseeya waa habka ugu wanaagsan ee lagugu caawin karo inaad ka xoroobato warqadaha ashtakada ee dhibsada.
Karti shaandhaynta Harmonics aan Caadi ahayn
Muuqaalka ugu weyn ee tan Awood sare filtar hoose oo hoose waa ay awoodda attenuation harmonic - marka loo eego xogta tijaabada ah ee lagu kalsoonaan karo ee kooxda tijaabada ee FMUSER, feejignaanta labaad ee is-waafajinta iyo is-waafajinta sare ee tan 20kW shaandhada hoose ee RF Waxay gaadheen siday u kala horreeyaan ≥ 35 dB iyo ≥ 60 dB, taas oo ah awood shaandhayn xoog leh oo isku-dhafan ee xarunta raadiyaha.
Khasaaraha Gelida Hoose ee Dheeraadka ah
The luminta gelinta hoose ee FMUSER 20kW FM filtar hooseeya Waxay ka dhigaysaa mid ku habboon heerarka korantada ilaa 20000 watts, taas oo macnaheedu yahay in shaandhada RF-gan ee cajiibka ah, aad awooddo inaad isku darto adoo isticmaalaya noocyo kala duwan oo raadiyeyaal ah oo awoodo kala duwan ku leh xarunta raadiyaha, dhagaystayaashuna waxay heli karaan barnaamijyada raadiyaha tayada ugu sareysa iyo harmonics aad u hooseeya! Xidhiidhiyaha: 3 1/8 "Awood gelinta ugu badan 20kw
Waayo-aragnimada Isticmaale ee ugu Fiican
Shaandhooyinka 20kW Low Pass ee iibka ah, oo lagu dhex dhisay nidaam isku xidhid fudud, ayaa si gaar ah loogu dhisay Xarunta Raadiyaha FM. Iyadoo la tixgelinayo waayo-aragnimada isticmaale ee ugu fiican, Nidaamka shaandheynta wuxuu sahlayaa is-dhexgalka fudud ee gudbiyaasha FM.
FMUSER waxay bixisaa khad dhamaystiran oo ah filtarrada FM iyo UHF/VHF Xakamaynta is-waafajinta ee xarumaha idaacadaha.
Si caalami ah, waxaan jeclaan lahayn inaan ka caawino idaacadaha idaacadaha adduunka oo dhan si ay u go'doomiyaan gudbiyaasha FM-yada ee dhow, waxaan ogaanay in qaar ka mid ah ay muujinayaan xiisaha weyn ee isku dhafka FM-yada badan ee hal anteeno sayid ah, kuwa kale waxay jeclaan lahaayeen inay yeeshaan codsiyo gaar ah. gudbiyaashooda badan ee saldhigyadooda. 20kW FM filtar hooseeya, tusaale ahaan, waa mid ka mid ah iibkeena ugu wanaagsan filtarrada harmonics FM loo isticmaalo isku dhafka idaacadaha FM-ta oo gaaraya ilaa 20kW, waxaa laga yaabaa inaad ku aragto ninkan weyn idaacadaha waaweyn ee FM-ka qaarkood.
WAXAAN MAR WALBA DHAGEYSANAYNAA BAAHIDAADA haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah iibkayaga ugu sarreeya filtarrada RF harmonics.
Qiyaas inaad u baahan tahay wax ka badan waxaad aragto
Sida aan kor ku soo sheegnay, waxaan nahay kuwa ugu fiican soosaarayaasha qalabka idaacadaha aagga caalamiga ah, ka sokow 20kW shaandhada hoose ee RF, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa kuwa kale filtarrada RF-iibka sare nuxurka soo socda. Waa hagaag, tayada wanaagsan iyo kharashka miisaaniyada sida had iyo jeer.
Shaxda A. FM/VHF LPF Shaandheynta Gudub Hoose ee Iibka
Midda Xigta waa 10kW VHF Bandreject Filter VHF Shaandheynta Baaskiilka ee BSF fama Sale | Skip
Qoondaynta model Max. Power Input VSWR
Frequency kala duwan
2aad ee harmonic
Xidhiidhiyayaasha Booqo wax badan
Shaxda B. 10kW VHF BSF Bandreject Shaandhaynta Iibka
Tii hore waa FM/VHF LPF Shaandheeyaha Kaasaska Hoose ee Iibka | Skip
Midda Xigta waa 350W UHF DTV BPF Shaandheeyaha Baadhitaanka ee Iibka | Skip
Qoondaynta model Max. Power Input VSWR fv f0±4MHz
3 1 / 8 " More
Jaantuska C. 350W UHF DTV BPF Shaandheeyaha Baadhitaanka ee Iibka
Tii hore waa 10kW VHF BSF Bandreject Shaandhaynta Iibka | Skip
Midda Xigta waa Shaandheynta Bandpass FM BPF ee Iibka | Skip
Qoondaynta model Max. Power Input godadka VSWR Loss galinta f0
Jaantuska D. FM BPF Shaandheynta Baadhka Baashaan ee Iibka
Tii hore waa 350W UHF DTV BPF Shaandheeyaha Baadhitaanka ee Iibka | Skip
Midda Xigta waa Shaandheynta Baadhka Baadhka ee VHF BPF ee Iibka | Skip
Qoondaynta model Max. Power Input godadka VSWR
Shaxda E. VHF Shaandheeyaha Baadhitaanka BPF ee Iibka
Tii hore waa Shaandheynta Bandpass FM BPF ee Iibka | Skip
Ku noqo FM/VHF LPF Shaandheeyaha Kaasaska Hoose ee Iibka | Skip
Iibso Shaandheynta RF Harmonics ee Xarunta Raadiyaha? Waa kan meesha saxda ah!
FMUSER waa mid ka mid ah soosaarayaasha shaandhada RF ugu fiican ee soo saara harmonics Filter iib ah ku dhawaad ​​200+ dal iyo gobolo aduunka ah, halkan waxaa ah wadamada la soo jeediyay ee laga yaabo inaad tixraac ka sameyso.
Had iyo jeer waxaan halkaan u joognaa baahiyahaaga
Weli miyaad ka fekereysaa Qiimaha filter RF harmonics? Waxaan naqshadeynaa oo soo saareynaa miisaaniyad oo la awoodi karo filtarrada harmonics ee idaacadaha, ka LPF filtarrada kaadhka hoose ilaa filtarrada bandstop iyo filtarrada bandpass FM/UHF/VHF, iwm
Buuxi xaashida "Nala soo xidhiidh" ee bidixda iyo noo soo sheeg faahfaahinta aad u baahan tahay, mid ka mid ah iibkayaga khibradda leh ayaa isla markiiba ka jawaabi doona oo gacan ka geysan doona xulashada shaandhada harmonics FM/TV kaas oo buuxinaya baahidaada, gaar ahaan su'aalaha sida iibka sare-iibka shaandhada hoose ee iibka, habeynta filter filter bandpass, xal shaandhaynta dhamaystiran, iwm. Hagaag, su'aalaha caadiga ah sida qiimaha, wakhtiga bixinta, ama faahfaahinta sidoo kale waa bilaash in la waydiiyo. Waxaad u baahan tahay dheh, MAR WALBA WAANU DHAGEYSANAYNAA.
▲ Shaandheynta RF Harmonics-ka ugu Fiican ee Iibka ▲
Qaybta hore waa Shaandheynta RF Harmonics-ka ugu Fiican ee Iibka | Skip
Qaybta Xigta waa Xaqiiqooyinka xiisaha leh iyo Q&A ee ku saabsan Shaandhaynta RF | Skip
Qaar ka mid ah macaamiisheena ayaa shaki ka qaba sida, ma garanayo runtii sida loo doorto nooca saxda ah RF harmonics filter, ama waxaan rabaa laba nooc oo ah filtarrada harmonics laakiin waxaan haystaa kaliya 50K$ wax iibsiga, iwm.
Sida laga soo xigtay cilmi-suuqgeynta dhamaystiran ee filtarrada harmonics FMUSER, waxaan ogaanay in iibka ugu sarreeya filtarrada harmonic RF leeyihiin sifooyinka soo socda ee ay wadaagaan:
1. Kala duwanaansho shaandhaynta iyo OEM soo dhawaynta
Habaynta iyo naqshadaynta shaandhada ayaa ka tarjumaysa hal-abuurka soo saaraha qalabka baahinta iyo ku-dhaqanka qalabka baahinta. Shaandheeyaha RF harmonics-ka ugu fiican waa inuu lahaadaa sifooyinka qiimaha miisaaniyada, nolosha adeeg dheer. FMUSER 20kW filtarrada hoose ee FM waxay ku dhacaan adeegsi fudud oo qiimo jaban hawl wadeenada idaacadaha
2. La heli karo ugu yaraan 1 PCS Naqshad iyo Adeeg Gaar ah
Naqshadeynta iyo habaynta adeegga ayaa la bixiyaa ugu yaraan 1 pcs Filter. Sababtoo ah hawlwadeenada kala duwan ee raadiyaha waxay u baahan yihiin inay wajahaan baahiyaha dhabta ah ee idaacadaha kala duwan, haddii alaab-qeybiyaha RF uu si xor ah u habeyn karo iyo filtarrada naqshadeynta waxay noqdeen mid ka mid ah heerarka lagu tijaabiyo awoodda sahayda alaab-qeybiyeyaasha shaandhada. Waa maxay sababta FMUSER kaliya uga soocantay alaab-qeybiyeyaal badan oo shaandhooyin ah ayaa inta badan sababta oo ah shaandhooyinkooda RF waa kuwo la beddeli karo, wax qabad sarreeya, qiimaha miisaaniyada, iyo fududahay in la isticmaalo. Dhib malaha inta filtarrada dhamaadka-sare ee aad rabto inaad habayso, FMUSER had iyo jeer way ku adeegi kartaa
3. Tilmaamaha Iibka shaandhaynta RF Harmonics ee FMUSER
Sida loo doorto filtarrada RF harmonics ee ugu sarreeya Mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha xarunta raadiyaha sanadka 2021 waxay ahayd dhibaatada lagu booriyay qaar badan oo ka mid ah macaamiisha cusub iyo kuwii hore ee FMUSER
Ka dib markii aan daraasad ku samaynay kooxdayada farsamada, waxaan ogaanay in qaar ka mid ah xuduudaha xirfadlayaasha ay sidoo kale awood u yeelan karaan inay kaa caawiyaan inaad doorato, waxaan sidoo kale ku lug leenahay ciyaaraha, annagoo u heellan inaan ku siinno shaandhadayada harmonics-ka ugu fiican adiga, sidaas darteed, haddii aad u baahan tahay filtarrada harmonic RF iib ah ama u baahan wax macluumaad ah oo ku saabsan kii ugu dambeeyay qiimaha filtarrada harmonic ka FMUSER, fadlan taas ogow MAR WALBA WAANU DHAGEYSANAYNAA!
Hoos-u-dhaca Pim-ka ayaa ka xoog badan calaamadaha
Tusaale ahaan, PIM (AKA: Passive Intermodulation), waxaan ognahay in PIM ay tahay natiijada calaamadaha aan faa'iido doonka ahayn ee ay abuuraan isku dhafka laba ama in ka badan oo ah qalabka aan tooska ahayn. Ishaarooyinkan cusubi waxa ay faragelin doonaan oo ay qalloocin doonaan calaamadihii asalka ahaa ee ay isku gudbiyaan labada nidaam ee wireless-ka. Waxay dhalin kartaa faragalin calaamad ah nidaam kasta oo wireless ah. Low PIM macnaheedu waa haysashada calaamad xoog leh oo leh xajmi badan oo isticmaaleyaal badan, taas oo macnaheedu yahay ku qanacsanaanta macaamiisha iyo dakhliga sare ee hawl-wadeenada.
Waxaad u baahan doontaa Khasaare Gelid Hoose iyo Soo Celinta Khasaare
Luminta soo celinta iyo soo celinta waxay door muhiim ah ka ciyaartaa naqshadeynta iyo horumarinta aaladaha soo noqnoqda sida filtarrada RF, qaybiyeyaasha awoodda RF, iyo amplifiers RF. Waa dhacdo dabiici ah oo ku dhacda dhammaan noocyada gudbinta (gudbinta xogta ama gudbinta korontada). Maadaama ay tani run u tahay ku dhawaad ​​dhammaan xadhkaha gudbinta jirka ama dariiqyada korantada, inta ay sii dheeraato, waa sii kordhisaa khasaaraha. Intaa waxaa dheer, khasaarahan ayaa sidoo kale ka dhici doona goob kasta oo isku xirka khadka, oo ay ku jiraan kala-goysyada iyo xirayaasha. Isku imaatinka soo noqnoqda ee sarreeya sida filtarrada RF, filtarrada leh luminta gelinta hoose iyo dhibcaha kale ee iibka ee soo jiidashada leh waxay badanaa noqon karaan doorashada koowaad ee hawl-wadeennada raadiyaha.
Aad bay uga badan tahay waxaad aragto
Sida muuqata, waxaa jira tixraacyo muhiim ah oo ka badan luminta Gelida, cabbirada kale sida qiimaha lifaaqa iyo maaraynta awoodda sare, iwm sidoo kale waa arrimo muhiim ah marka la iibsanayo shaandhada harmonics RF wanaagsan. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo bilaash ah oo ku saabsan shaandhada harmonics RF, fadlan hubi inaad la xiriirto kooxdayada farsamada, waxay ku sugan yihiin 7/24 online iyagoo sugaya warkaaga wanaagsan. Waa kuwan waxa kooxda farsamada FMSUER ay soo jeediyaan:
Yaraynta cabbirka shaandhada iyo tartanka qiimaha badeecada ugu fiican ee tiro balaadhan oo ah soo noqnoqda raadiyaha microwave, sida nidaamka isgaarsiinta, IEEE 802.
Deganaanshaha heerkulka heer sare ah
Maareynta awoodda sare iyo qiimaha hoos u dhigista oo aad u fiican
Si loo xakameeyo Harmonics Gudbiyeyaasha Saldhigga FM: Gudbiyeyaasha FM waxay inta badan dhaliyaan iswaafajinta - dhufashada inta jeer ee gudbiyaha. Qaar ka mid ah kuwan waxay sababaan faragelinta VHF-TV iyo UHF-TV soo dhaweynta iyo soo dhaweynta raadiyaha gacanta. Taxanaha filtarrada-hooseeya waxay dhaafaan dhammaan guutooyinka FM khasaare hoose waxayna bixiyaan xakamaynta is-waafajinta la taaban karo.
▲ Sida loo doorto shaandhada FM Harmonics-ka ugu fiican ▲
Xaqiiqooyinka xiisaha leh iyo Q&A ee ku saabsan Shaandhaynta RF
Qaybta hore waa Sida loo doorto shaandhada FM Harmonics-ka ugu fiican | Skip
Ku laabo Qaybta Koowaad Halkee laga Iibsan karaa Filterka Kaaska Hoose ee FM ee ugu Fiican | Skip
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato qaab dhismeedka wareegga ama saamiga suuqgeynta ee shaandhada RF, FMUSER waxay kugula talineysaa inaad wax ka barato elektaroonigga dadban ama si toos ah u weydiiso kooxdayada iibka, sababtoo ah waxa aad akhriday kuma filna inay si buuxda oo cad kuugu sharaxdo shaandhada RF. (PS: Wikipedia ma awoodo inuu sameeyo). Sidaa darteed, waxa aan kuu samayn karno waa in aan si fudud oo hufan u sharaxno qaabka iyo noocyada filtarrada RF, iyo sida filtarrada RF u shaqeeyaan. Halkan, FMUSER waxay taxaysaa su'aalo xiiso leh oo ku saabsan Shaandhaynta RF ee ay kiciyeen macaamiishayada idaacadaha, iyo dabcan jawaabahayaga. Fadlan sii wad akhrinta haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato filtarrada RF.
Q1: Sidee bay filtarrada RF u shaqeeyaan siyaabaha kale marka laga reebo FM/TV station?
Filters-ka RF waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah tignoolajiyada wireless-ka, filtarrada RF waxaa loo adeegsadaa qaataha raadiyaha si nooca saxda ah oo kaliya loogu madadalo karo iyadoo la shaandheynayo xadhkaha kale ee aan la rabin ee soo noqnoqda. Shaandhooyinka RF waxaa loo qaabeeyey qaab ay si fudud ugu shaqayn karaan soo noqnoqoshada inta u dhaxaysa dhexdhexaad ilaa xad aad u sarreeya, tusaale ahaan megahertz iyo gigahertz. Sababtoo ah sifada ay ku shaqeyso, waxaa inta badan loo isticmaalaa qalabka sida raadiyaha baahinta, isgaarsiinta wireless, iyo telefishinka, iwm.
Shaandhooyinka RF waxay shaandheyn karaan qaylada ama waxay yareynayaan faragelinta calaamadaha dibadda ee saameyn kara tayada ama waxqabadka nidaamka isgaarsiinta. Maqnaanshaha filtarrada saxda ah ee RF ee meesha ku jira waxay dhibaato ku keeni kartaa isu-gudbinta calaamadaha calaamadaha taasoo ku dambayn karta inay dhaawacdo habka isgaarsiinta.
Iyadoo filtarrada RF ee saxda ah ay ku jiraan, faragelinta dibadda oo ay weheliso khalkhalka calaamadda ee ay soo saarto nidaamka isgaarsiinta deriska ayaa si fudud loo xannibi karaa. Tani waxay ilaalinaysaa tayada is-dhaafsiga calaamadaha la rabo iyadoo si fudud u sifaynaysa dhammaan soo noqnoqda calaamadaha aan la rabin.
Sidaa darteed, filtarrada RF waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nidaamka isgaarsiinta wireless-ka, tusaale ahaan satellite-ka, radar, nidaamka wireless-ka mobaylada, iyo in ka badan.
Guud ahaan, filtarrada ayaa ah kuwa fudud waxayna kaa caawin karaan kor u qaadida waxqabadka soo noqnoqda calaamadaha. Xaaladda halka filtarrada RF ay ku guuldareystaan ​​inay bixiyaan waxqabadka la filayo, markaa waxaad sahamin kartaa doorashooyin kale oo kala duwan, mid ka mid ah waa ku darida cod-weyneeye naqshadeyntaada. Laga soo bilaabo cod-weyneeye Trellisware ilaa mid kasta oo kale oo awood RF ah, waxaad u bedeli kartaa soo noqnoqda calaamadaha hoose kuwa sare; sidaas darteed kor loogu qaado waxqabadka guud ee naqshadaha RF.
Intaa waxaa dheer, filtarrada RF waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan deegaanka taleefanka gacanta. Marka ay timaado mobilada, waxay u baahan yihiin qadar go'an oo band ah si ay si sax ah u qabtaan. Maqnaanshaha shaandhada saxda ah ee RF, kooxaha kala duwan looma oggolaan doono inay isla mar wada noolaadaan taasoo ka dhigan in kooxaha qaarkood la diidi doono, tusaale ahaan Nidaamka Satellite Navigation (GNSS), badbaadada dadweynaha, Wi-Fi, iyo in ka badan. Halkan, filtarrada RF waxay ciyaaraan door muhiim ah iyagoo u oggolaanaya dhammaan guutooyinka inay wada noolaadaan isku mar.
Waad ku mahadsan tahay horumarka R&D ee qaan-gaadhka ah ee FMUSER, waxaanu kuu daboolnaa daraasiin filtarrada kala duwan adiga, fadlan hubi inaad la xidhiidho kooxdayada iibka Haddii aadan hubin kuwa ugu fiican xaruntaada baahinta, kooxdayada iibka iyo farsamada ayaa sugi doona DHAGAHA OO DHAN.
Q2: Sidee u Sameeyaa Shaandhaynta RF?
Guud ahaan, filtarrada RF waxay ka kooban yihiin resonators oo isku xidhan waxaana loo qaabeeyey qaybo falcelin aan toos ahayn sida capacitors, inductors, iyo (in ka yar inta badan) transformers RF, kuwaas oo isku xidhan inductors. Shaandheeyayaashu inta badan waa toosan, oo marka loo baahdo nooc ka mid ah kordhinta waxa lagu dari karaa cod-weyneyaal RF ah oo lagu hirgeliyay transistor-ka RF (ha ahaato laba-cirifoodka ama saameeynta goobta). Shaandheeyayaashu waa lagama maarmaan marka ay timaaddo shaandhaynta calaamadaha aan loo baahnayn ee gelaya spectrum raadiyaha. Waxaa loo isticmaalaa marka lagu daro qalabka elektarooniga ah ee kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalkeeda ugu muhiimsan wuxuu ku yimaadaa qaybta soo noqnoqda raadiyaha.
Filterka hooseeya ee baaska, wareeggiisa kaas oo u oggolaanaya kaliya qaybaha soo noqnoqda ee hooseeya oo xannibaya dhammaan qaybaha kale ee soo noqnoqda waxaa loo yaqaan shaandheynta hoose. Magaca LPF laftiisu wuxuu muujinayaa inta jeer ee tirada yar.
Iyada oo ku saleysan codsiga iyo cabbirka qalabka wireless-ka, waxaa jira noocyo badan oo filtarrada, ie filtarrada godka, filtarrada qorshaynta, filtarrada korantada, filtarrada dielectric, filtarrada coaxial (aan la xiriirin fiilada coaxial), iyo in ka badan.
FMUSER waa soo-saare xirfad leh filtarrada RF harmonics. Waxaan haysanaa kaydka aqoonta qalabka baahinta ugu xirfadaysan iyo kooxda farsamada. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto filtarrada RF inta aad akhrinayso wadaagan, soo dhawoow si aad u weydiiso kooxdayada farsamada taageero.
Q3: Immisa Nooc oo Filterka RF ah ayaa jira iyo maxay yihiin sida saxda ah?
Shaandhooyinka Soo noqnoqda Raadiyaha waa nooc gaar ah oo wareeg ah oo u oggolaanaya calaamadaha saxda ah inay gudbaan inta ay baabi'inayaan calaamadaha aan loo baahnayn. Marka ay timaado dhinaca shaandhada shaandhada, waxaa jira afar nooc oo shaandhada RF aasaasiga ah, ie; heer sare; band-baas; iyo band-diidi (ama filtarrada darajada). Shaandhooyinka RF ee ugu caansan waxay leeyihiin qaab-dhismeedka jaranjarada, iyo "booska" qaybaha (inductors iyo capacitors) waa waxa qeexaya nooca; qiyamka qaybaha ayaa qeexaya inta jeer ee calaamadaha ay xannibaan ama aysan xannibin.
Shaandheynta Gudub Hoose - Shaandheeyaha Lowpass - LPF
Shaandheeyaha baaska hooseeya waa midka kaliya ee u oggolaanaya soo noqnoqoshada hooseeya inay dhex maraan isla mar ahaantaana, yareynaya soo noqnoqoshada calaamadaha kale. Qadarka hoos u dhaca inta jeer ee calaamaduhu marka ay dhex maraan bandpass waxaa go'aamiya arrimo badan sida shaandhada shaandhada, qaabka, iyo tayada qaybaha, iwm. baasaboorka si uu u gaaro diidmadiisa kama dambaysta ah.
filtarrada kaadhka hooseeya waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan. Codsiga ugu weyn ee shaandhadan ayaa ah xakamaynta harmonics-ka cod-weyneeye RF. Dabeecaddani waa muhiim tan iyo markii ay ka caawiso ka hortagga faragelinta aan loo baahnayn marka ay timaado xadhkaha gudbinta ee kala duwan. Inta badan, filtarrada kaarka hooseeya waxaa loo adeegsadaa codsiyada maqalka ah waxayna shaandheeyaan dhawaaqyada wareeg kasta oo dibadda ah. Ka dib marka la sifeeyo calaamadaha soo noqnoqda sare, soo noqnoqda calaamaduhu waxay helayaan tayo cad oo qallafsan.
Shaandheynta Sare ee Sare - Filterka Sare ee Sare - HPF
Si ka duwan shaandhada baaska hoose, filter-ka sare ee baska (HPF) wuxuu u ogolaanayaa oo kaliya calaamada soo noqnoqda sare inay dhex maraan. Run ahaantii, filtarrada baaska sare aad bay u dhammaystiran yihiin filtarrada kaadhka hoose maadaama labadoodaba loo isticmaali karo si wadajir ah si loo soo saaro shaandhada baasaska. Naqshadeynta shaandhada baaska sare waa mid toos ah oo hoos u dhigaysa soo noqnoqoshada ka hooseeya barta bilowga.
Caadi ahaan, filtarrada baaska sare waxaa lagu isticmaalaa hababka maqalka kuwaas oo dhammaan soo noqnoqda hoose lagu sifeeyo. Intaa waxaa dheer, waxaa loo isticmaalaa in laga saaro bass ee ku hadla yar yar, iyo xaalado badan; filtarradan ayaa si gaar ah loogu dhisay sameecadaha. Si kastaba ha noqotee, haddii ay timaado mashruuc kasta oo DIY ah, filtarrada baasaaska sare si fudud ayaa loogu xidhi karaa nidaamka.
Shaandheeyaha Gudubka Baaskiilka - Filterka Baadhitaanka - BPF
Filter-ka bandpass (BPF) waa wareeg u oggolaanaya calaamadaha laba jeer oo kala duwan inay dhex maraan oo ay yareeyaan calaamadaha aan ku dhex jirin xadka aqbalaadda. Inta badan filtarrada bandpass waxay ku xiran yihiin il kasta oo koronto oo dibadda ah waxayna isticmaalaan qaybo firfircoon, sida wareegyada isku dhafan iyo transistor-yada. Noocyada noocaan ah waxaa loo yaqaan filtarrada bandpass firfircoon. Dhanka kale, filtarrada band-yada qaarkood ma adeegsadaan ilo koronto oo dibadda ah waxayna si weyn ugu tiirsan yihiin qaybaha dadban, ie inductors iyo capacitors. filtarradan waxaa loo yaqaan filtarrada bandpass dadban.
Shaandheeyayaasha kaarka Band waxaa inta badan lagu isticmaalaa qaataha iyo gudbiyaasha wireless-ka. Shaqadeeda ugu weyn ee gudbiyaha waa in la xaddido xawliga xawliga ee signalka wax soo saarka ilaa ugu yaraan si xogta lagama maarmaanka ah loogu gudbiyo xawaaraha iyo qaabka la rabo. Marka ay timaado soo-dhowrka, shaandheynta baasaska guutadu waxa ay ogolaataa in tiro la doonayo oo taxanayaal ah oo keliya in la dejiyo ama la maqlo, iyada oo la jarayo calaamadaha kale ee ka imanaya mawjadaha aan loo baahnayn.
Isku soo wada duuboo, marka shaandhada bandpass si fiican loo naqshadeeyay, waxay si fudud u kordhin kartaa tayada calaamadaha, isla markaana, waxay yarayn kartaa tartanka ama faragelinta calaamadaha.
Band Diidey Filter - Band Jooji Filter - Diid Filter - BSF
Mararka qaarkood waxaa loo yaqaannaa filter joojinta band (BSF), diidmada band waa shaandheyn u oggolaanaysa inta badan inta jeer ee soo noqnoqda inay dhex maraan iyada oo aan isbeddelin. Si kastaba ha ahaatee, waxay hoos u dhigtaa soo noqnoqoshada noocaan oo kale ah oo ka hooseeya heer aad u gaar ah. Waxay u shaqeysaa si ka soo horjeeda kan shaandhada bandpass.
Asal ahaan, shaqadeedu waa inay ka gudubto soo noqnoqoshada eber ilaa meesha ugu horeysa ee la gooyey ee soo noqnoqda. Inta u dhaxaysa, waxay dhaaftaa dhammaan soo noqnoqoshada ka sarreeya barta labaad ee goynta ee inta jeer. Si kastaba ha ahaatee, waxay diiday ama xannibaysaa dhammaan soo noqnoqda kale ee u dhexeeya labadan qodob.
Isku soo wada duuboo, filtarku waa shay u ogolaanaya calaamaduhu inay dhex maraan iyadoo la kaashanayo baaska. Taasi waxay tidhi, xadhiga joogsiga ee shaandhada ku jira waa meesha ay soo noqnoqoshada qaarkood diidaan shaandhayn kasta. Ha ahaato baas sare, baas hoose, ama baasbaas, shaandhada ugu habbooni waa ka aan wax khasaare ah ka soo bixin baasabka. Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii, ma jiraan wax la yiraahdo shaandheyn ku habboon maadaama baska uu la kulmi doono khasaaro soo noqnoqda oo aan suurtagal ahayn in la gaaro diidmo aan dhammaad lahayn marka ay timaado xirmada joogsiga.
▲ Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Shaandhaynta RF ▲
20kW FM Shaandhiyaha Gudbo Hoose x 1PCS
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato 20kW FM Filter Low Pass
Tusmada Korontada ee FMUSER 20kW Shaandheynta Gudub Hoose (Tixraac Kaliya)
La wadaag dheeraad ah oo ku saabsan Faragelinta Raadiyaha
Qaybta Xigta waa Tusmada Korontada ee FMUSER 20kW Shaandheynta Gudub Hoose | Skip
Geez, waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato! Si kastaba ha noqotee, hawl wadeen raadiye ahaan, runtii waxaad taqaanaa in ka badan FMUSER, laakiin halkan, si aad u ilaaliso oo aad u hagaajiso qalabkaaga idaacadaha, FMUSER wali waxay u baahan tahay inay kuu soo bandhigto saddex talo oo adiga ah, ka dib markaad iibsato shaandhadan 20kW FM hooseeya , saddex shay oo aad u baahan tahay inaad ogaato: hawlgalka, rakibidda, iyo TV-ga cable.
1. Hawlgalka Filterka RF
Shaandheyntan kaarka hooseeya waxaa loogu talagalay in lagu dhimo oo inta badan kiisaska la baabi'iyo faragelinta telefishinka ee ay keento tamarta is-waafajinta ee ka dhex abuurma gudbiyaasha FM.
Shaandheeyaha waa laba jiho taasoo la micno ah in lagu rakibi karo labada dhinac. Moodeelka shaandhada gudbiyaha ee 20kW FM A wuxuu muujinayaa hoos u dhac ku yimaadda soo noqnoqoshada ka sarreeya 140 MHz sida ku cad qalooca jawaabta hoose.
OGEYSIIS: Digniinta gelinta ee shaandhada 20kW waa in aanay ka badan 20000 watts. Isticmaalka awooda sare waxay si joogta ah u dhaawacaysaa shaandhada waxayna burinaysaa dammaanadda
2. Rakibaadda Filterka RF
Shaandheeyaha waa in lagu rakibaa meel u dhow wax soo saarka gudbiyaha sida la taaban karo
Isticmaalka 3 1/8" Xidhiidhiyayaasha EIA oo leh xidhiyaal lab ah oo ku yaal labada daraf.
TAXADIR: Filter-ku waxa laga yaabaa in uu kululaado inta lagu jiro hawsha, tani waa calaamad muujinaysa in ay shaqadeeda qabsanayso iyada oo la baabi'inayo tamarta harmonic qaabka kulaylka.
3. Cabashada ka timid TV-ga Cable ee Xaafadaada
Haddii gudbiyahaagu uu farageliyo nidaamka TV-ga fiilo, dhibka waxaa laga yaabaa in aan lagu xalin isticmaalka shaandhada hoose ee baaska. Qaar ka mid ah shirkadaha fiilada ee aan ku qaadin kanaalada FM-ka nidaamkooda ayaa laga yaabaa inay kanaalada TV-ga dhigaan kooxda baahinta FM-ta. Haddi ay arintu sidaas tahay, inta jeer ee aasaasiga ah (sidade) ayaa laga yaabaa inay keento faragelinta oo shaandhada waxay noqon doontaa mid aan waxtar lahayn. Macluumaad dheeraad ah kala xidhiidh shirkadda xadhkaha ee xaafaddaada. Xaaladaha qaarkood, shirkadda fiilada waxay xallin kartaa dhibaatada iyada oo beddeleysa fiilkii hore ama duugoobay.
Naxaasta ugu fiican iyo alaabta naxaasta ah ee qalinka ah, khibrada isticmaalaha waa la ballanqaaday
Dhererka La Yareeyay
Dhammaan daboolida Kooxda FM
Lammaanayaasha Rakiban ee Ku dhex jira ayaa la heli karaa
Khasaare Gelid aad u hooseeya iyo VSWR
Noocyo kala duwan oo soo noqnoqda ayaa diyaar u ah in la doorto, taas oo wanaajisa awoodda baahinta
Heerarka awooda kala duwan waxay si buuxda u daboolayaan baahiyaha xaalado badan
Heerka hogaaminta warshadaha ee luminta galinta hoose iyo VSWR waxay kor u qaadaysaa tayada baahinta idaacada
Hoos u dhigista sare ee 2nd iyo 3rd harmonic, looma baahna in laga walwalo wax soo saarka
Waxaad rabto dheh, waxaan kaa caawineynaa habeynta.
Diidmada Sare ilaa 10aad Harmonic
85 95 965 mm
85 95 495 mm
~ 8 kiilo
~ 4.4 kiilo
1. Sababaha ka dambeeya qiiqa iswaafajinta iyo qiiqa
Gudbiyaha raadiyaha hiwaayadda ee si liidata u shaqeeya ayaa laga yaabaa inuu sabab u noqdo iswaafajinta awoodda sare leh. Waxay sidoo kale saameyn doontaa gudbinta raadiyaha ee qalabka kale ee u dhow.
Amplifiers sidoo kale waxay soo saaraan harmonics. Sida aynu wada ognahay, waxay qalloocin doonaan mawjadaha signalada, ama ilaa xad ma aha kuwo aan toos ahayn. Naqshadaynta idaacadaha liidata waxay kordhin doontaa heerarka iswaafajinta. Sidaa darteed, waxaad yareyn kartaa faragelinta adigoo si fudud u qaadanaya naqshad wanaagsan oo madal ah.
Xitaa haddii uusan qalabku si firfircoon u gudbin, waxay soo saari doontaa qiiqa xunxun. Tan waxa laga yaabaa inay sabab u tahay calaamadaha xawaaraha sare leh, sahay koronto oo buuq badan, ama dhibaatooyin kale oo calaamad ah. Haddii qalabku si firfircoon u gudbiyo, qiiqa xunxun wuxuu u dhici karaa laba sababood:
Xadhkaha korantada ee ku xidhan raadiyaha waxa uu ka kooban yahay buuq badan oo soo noqnoqda. Waxay keentaa in cod-weyneeye raadiyaha uu soo saaro wareegyo gaar ah.
Qaybaha qaar ee PCB-ga ayaa soo qaada inta jeer ee aasaasiga ah.
OGEYSIIS: Gudbinta xunxun ayaa laga yaabaa inay dhacdo haddii gudbiyaha u gudbiyo si khaldan meel ka baxsan xajmiyeedka saxda ah ama qaabka la isticmaalay. Xaaladdan oo kale, gudbiyaha ayaa soo saara firiiric, kaas oo faragelin kara saldhigyada kale ee loo habeeyay wareegyada u dhow xargaha soo noqnoqda.
2. Sidee loo yareeyaa Saamaynta Harmonics iyo Emission-ka Wasagsan?
Tallaabooyinka soo socda ayaa la qaadi karaa si loo xakameeyo heerka faragelinta:
Hubi gudbiyaha si aad u yarayso qiiqa wasakhaysan ee joogtada ah.
Hubi in qalabka qeylada badan iyo shirarka ay ka fog yihiin anteenada.
Ka fogow isticmaalka gudbiyaasha raadiyaha hiwaayadda leh ee hawlahooda liita.
OGAYSIIS: qiiqa isku-dhafan iyo kuwa beenta ah lama iska ilaalin karo laakiin waa la yarayn karaa ilaa xad. Calaamad kasta oo is-waafajisa oo ka baxsan kanaalka loo qoondeeyay ee gudbiyaha waxaa loo arkaa gudbinta been abuur ah. Badanaa waa natiijada qalabka si liidata u shaqeeya ama faragelinta deegaanka.
Kuwa soo socdaa waa aqoonta raadiyaha oo dheeri ah oo la wadaagayo waxa faragelinta raadiyaha ay tahay iyo sida loo yareeyo saameynta faragelinta raadiyaha. Waxaan rumaysanahay in hore loo helay macluumaad ku filan filtarrada RF, laakiin qaar ka mid ah gudbinta calaamadaha raadiyaha iyo dhibaatooyinka soo dhaweynta ayaa weli ka jira nolosha dhabta ah. Macaamiil badan oo ku sugan goobta raadiyaha ayaa si xun ugu tufay faragelinta raadiyaha waxayna naga codsadeen inaan u samayno xalal gaar ah iyaga. Haddaba, waxaanu si kooban u qeexi doonaa aqoonta dhabta ah ee ku saabsan faragelinta raadiyaha ee boqollaal eray oo hadhay
1. Qalab noocee ah ayay saameyn kartaa Faragelinta Raadiyaha?
Qalabka raadiyaha iyo kuwa aan raadiyaha ahaynba waxaa si xun u saameyn kara calaamadaha raadiyaha. Aaladaha raadiyaha waxaa ka mid ah idaacadaha AM iyo FM, telefishinada, telefoonada aan xadhkaha lahayn, iyo is dhex galka wireless-ka. Qalabka elektaroonigga ah ee aan raadiyaha ahayn waxaa ka mid ah hababka maqalka ee stereo, telefoonnada fiilsan, iyo is-dhexgalka fiilooyinka caadiga ah. Dhammaan qalabkan waxaa carqaladayn kara calaamadaha raadiyaha.
2. Maxaa Sababi Kara Faragelinta Raadiyaha?
Faragelintu waxay badanaa dhacdaa marka war-fidiyeyaasha raadiyaha iyo qalabka elektaroonigga ah lagu shaqeeyo meel u dhow midba midka kale. Faragelinta waxaa keenay:
Qalabka gudbinta raadiyaha oo si khaldan loo rakibay;
Digniinta raadiyaha oo aad u daran oo ka timid gudbiye dhow;
Calaamadaha aan la rabin (oo loo yaqaan shucaaca xun) ee uu dhaliyo qalabka gudbinta; iyo
Aan ku filnayn gaashaanka ama shaandhaynta qalabka elektaroonigga ah si looga hortago inay soo qaadaan calaamadaha aan loo baahnayn.
3. Maxaad Qaban Kartaa?
Isku day inaad ka hortagto dhibaatooyinka faragelinta ka hor intaanay dhicin. La tasho maamulka degmada si aad u ogaato xeerarka khuseeya anteenooyinka iyo dhismayaasha taawarada. Markaad haysato qorshe rakibaad oo buuxinaya shuruudaha degmada, la hadal deriskaaga. Sharax waxaad rabto inaad sameyso iyo sababta. U hubso inaad ku dadaali doonto inaad ka hortagto dhibaato kasta. Xusuusi iyaga in GRS iyo hawl-wadeennada raadiyaha hiwaayadda ahi ay inta badan qabtaan adeeg dadweyne oo muhiim ah iyaga oo caawinaya maamullada maxalliga ah marka ay jiraan xaalado degdeg ah iyo munaasabado dadweyne oo waaweyn.
Hubi in qalabkaaga si sax ah loogu rakibay. Anteenada idaacaddu waa in ay ka fogaato guryaha deriska la ah inta ugu macquulsan kana fogaato xadhkaha korontada taasoo saameyn ku yeelan karta shaqadeeda. Si taxadar leh u akhri qaybta, Rakibaadda Idaacaddaada.
Ka shaqee saldhiggaaga adigoo maskaxda ku haya deriskaaga. Xaddid awoodda gudbiyaha, halka ay suurtagal tahay, ilaa heerka ugu hooseeya ee looga baahan yahay isgaarsiin ku filan. Saldhigyada GRS ee gudbinta, cod-weyneyaasha korontada lama oggola, wax soo saarka ugu badan ee anteenada waa inuusan ka badnaan 4 watts (hal dhinac ah; 12watts peak).
Hubi in qalabkaaga lagu hayo xaalad wanaagsan sida waafaqsan shuruudaha farsamo. Waqti ka waqti, waa in aad xaqiijisaa in inta jeer ee gudbinta ay sax tahay, xadhkaha xadhkaha goostay uu ku jiro xadka shaqada, fiilooyinka saldhiga, anteenada, iyo nidaamka dhulka ay xaalad fiican ku sugan yihiin.
4. Sidoo kale waa inaad:
U nugul dhibaatooyinka faragelinta iskuna day inaad sida ugu dhakhsaha badan u xalliso.
La shaqee deriskaaga si aad u ogaato waxa dhibaatada keenaya iyo waxa ka dhigaya mid ka sii wanaagsan.
Markaad isku dayayso inaad xal farsamo u hesho faragelinta, xaddid awoodaada gudbiyaha iyo wakhtiyada shaqada. Tixgeli in aad gabi ahaanba xidhid saldhigaada ilaa inta dhibaatada la saxayo.
Dareen Xoriyad inaad na waydiiso haddii aad la kulanto dhibaatooyin badan